16 အဘို့ရလဒ် oggy games
oggy နှင့်ပိုးဟပ် craassh
ပိုးပာပ် '' Craassh Oggy နှင့်ပိုးဟပ်ပြန်မှာများမှာ! နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဟင်းလျာများဒါမှမဟုတ်လေယာဉ်ပျက်ကျမှု cacophony အအိပျပျြောဘော့နိုးလိမ့်မည်ကိုဖမ်း။
oggy နှင့်ပိုးဟပ်: x-စရဖ snowball
, Oggy အပိုးဟပ်ဖမ်းရန် snowballs ကိုသုံးကိုကူညီပါခြင်း, ပိုးပာပ် Oggy ရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုအပေါငျးတို့သခိုးယူမသွားပါစေပါဘူး
သူ့ကိုသစ်ပင်များကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးခြင်းဂြိုဟ်ပတ်ပတ်လည်ပြေးအဖြစ် Oggy အပိုးဟပ်ကျော်ခုန်ကူညီပါ။ ရွှေ့ဖို့ mouse ကိုသုံးပါ။ ခုန်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ။
Oggy ကြက်သားယုတ်ပိုးဟပ်များကခိုးယူခြင်းဖြစ်သည်။ အပြေးပြိုင်ပွဲအနိုင်ရနှင့်စွမ်းအင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မြန်နှုန်းရရှိအားလုံးကြက်သားကိုစုဆောင်း, ပိုရမှတ်ဂိုးသွင်းဖို့ပထမနေရာမှာဖြစ် ... ပျော်စရာရှိသည်!
SpongeBob ကဒီမှာပါ! တစ်အာကာသယာဉ်မှူး, လက်ဝှေ့သမား, ပင်လယ်ဓားပြ, အိမ်ဖော်နှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်သူ့ကိုဖွင့်ဝတ်စားဆင်ယင်! မိမိအတပျော်စရာရှိသည်! weeeeeeeeeee
ဒါဟာသူတို့နှိုင်းယှဉ်သင့်ရဲ့ဂိုဏ်းပါပဲ။ သင်တို့နှင့်အတူအဘက်မည်သူ Chavs, Punk, Jocks နှင့် Hoodies? , သင့်လက်သီးဖိအားပေးရန်သင့်ရဲ့မာနထောင်လွှားပြသနှင့် schoolyard ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာမှစစ်တိုက်! ဒီ High School တွင်စစ်ပွဲများသည် ... ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၏!
Johnny Bravo အမြန်အစားအစာ
သငျသညျဂျော်နီ Bravo နှင့်အတူဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား? ထိုအခါမှသာသိပ်အစာစားခြင်း, သင်သူ့ကိုပိုပြီးကြွက်သားဖြစ်လာဖို့ကူညီရမယ်ဘယ်မှာဂျော်နီ Bravo နှင့်အတူတစ်ကယ့်ကိုသိပ်ကိုကောင်းတဲ့နှင့်ရယ်စရာဂိမ်းကိုဆက်ကပ်။ ဂျော်နီအစာရှောင်ခြင်းအစာအတွက် run အပေါင်းတို့သည်ကောင်းသောအစာအာဟာရကြောင့် fa ဖမ်းရန်ကိုကူညီပါ
ထိုထောင်ချောက်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ပညာရှိရှိသင့်ရဲ့ tools တွေကိုသုံးအရသာရှိတဲ့ရယူထားသောစောင့်ဆိုင်း!
Polly ပန်းခြံ၌ဤမွန်းလွဲပိုင်းလှပသောကွောငျကလေးတွေ့ဆုံရန်စိတ်အားထက်သန်သည်ကား, မိမိချစ်ရာသခင်၏စိတျနှလုံးတခါမှာအနိုင်ရမှသုံးပါကိုအဘယ်သို့သိရပါဘူး။ , သင့်ဗီရို၏ပျော့ပြောင်းပြီးကြည့်ရှုရွေးချယ်ရာတွင်, Polly တစ်ဦးလက် Give လှပသောဆံပင်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်လုပ်-ဦး